Izingcaphuno kanye ne-Co-Citations ye-SEO Yasekhaya | Martech Zone
Izingcaphuno kanye ne-Co-Citations ye-SEO Yasendaweni
ULwesibili, April 2, 2013 NgoLwesihlanu, Septhemba 14, 2018 Douglas Karr
I-pagerank algorithm yayidlalwe kakhulu ngoba kwakudingeka kuphela umuntu onesigqoko esimnyama se-SEO owakha izixhumanisi zamagama acebile abuyele kusayithi. Ngokuhamba kwesikhathi, kungakhathalekile ukuthi izixhumanisi zakhiwe kuphi, isiza lizonyuka libe sezingeni. AbakwaGoogle bazi ukuthi imiphumela yabo yenjini yokusesha ibidlalwa futhi iqinisa ubuchule babo bokuthatha eminye imigqa yekhwalithi. Ikhwalithi yesiza esixhumanisayo nokubaluleka kokuqukethwe kwabo kudlale indima kanye nokuthi zithandwa kangakanani izingosi ezixhumanisayo nezindawo okuya kuzo ngaphakathi kwezokuxhumana.
Yini izingcaphuno? Co-izingcaphuno?
Uma kukhulunywa ngemiphumela yenjini yokusesha yendawo nokuma kwebhizinisi lakho, ama-backlinks nokushiwo akuwona ukuphela komdlalo. Izingcaphuno ziyaqhubeka nokukhula ngokuthandwa yi-Google wokunquma ubuqiniso kanye negunya lebhizinisi kumiphumela yosesho lwendawo. Izingcaphuno azizona izixhumanisi, yimibhalo ehlukaniseka phakathi kweminye imibhalo esekhasini. Isibonelo esisodwa ikheli eligcwele nenombolo yocingo yebhizinisi lakho.
Ngaphandle kwezixhumanisi, iGoogle inganquma ukuthandwa kwebhizinisi lakho lasendaweni ngamangaki amasayithi ekhwalithi ephezulu afaka kuhlu ikheli lakho lebhizinisi kanye / noma inombolo yocingo. Lokhu kwaziwa ngokuthi izingcaphuno. Futhi amanye amasayithi abhala izingcaphuno ezifanayo ezixhuma kumasayithi angama-co-citations. Cabanga ngakho… ikheli elifakwe kuhlu kunoma yiliphi isayithi lingaveza ukuxhumana okudingeka i-Google ukucacisa ubudlelwano phakathi kokuqukethwe nebhizinisi lasendaweni.
Ukufakwa kuhlu kwekheli lakho lebhizinisi nenombolo yocingo ekhasini elinamagama angukhiye ahlobene nebhizinisi lakho manje kungakuthola ukubekwa kuleyo nhlanganisela yamagama asemqoka kumphumela wosesho wendawo.
Ngabe lokhu kusho ukuthi kufanele uphume uyothenga iphakethe lokuhambisa umkhombandlela ngebhizinisi lakho? Lutho neze. I-Google isiqala ukubandlulula izinkomba ezisezingeni eliphansi ezixhumanisa amapulazi amabhizinisi kuphela. Kodwa-ke, bakhokha ukunakekela okuningi kokucashuniwe kumasayithi ekhwalithi ephezulu afaka kuhlu imininingwane yebhizinisi lakho. Umsebenzi wakho ukuqinisekisa ukuthi imininingwane enikeziwe isesikhathini futhi inembile!
Yini ongayenza ukusiza?
Qiniseka ukufaka ifayela lakho le- igama lebhizinisi, ikheli kanye nenombolo yocingo kuyo yonke indawo yakho. Qiniseka ukuthi imininingwane yakho efakwe kuhlu iyahambisana kuwo wonke amasayithi. Sincoma ukuthi amaklayenti ethu ashicilele lolu lwazi ngokucacile kuwo wonke amakhasi.
Faka kuhlu futhi ugcine ibhizinisi lakho nge-Google ne-Bing.
Sebenzisa amazwibela acebile amabhizinisi endawo ngaphakathi kwesiza sakho ukuze izinjini zokusesha zithole imininingwane edingekayo yendawo.
Lapho kunethuba lokuthi ibhizinisi lakho kukhulunywe ngalo ku-athikili, cindezela ukukhishwa noma okuthunyelwe kubhulogi - qiniseka ukukwenza faka ikheli lakho eligcwele nenombolo yocingo. Lezi zingcaphuno ngaphakathi kokuqukethwe kwamagama angukhiye ofisa ukuhambisana nawo ziyasiza kakhulu.
Ungazithola kanjani izingosi ze-Citation?
I-Whitespark inendawo yokuthola izingcaphuno zendawo. Ithuluzi likuvumela ukuthi ufake amagama angukhiye uphinde ukhombe okunye okwehlukile kwemisho eyisihluthulelo. Ithuluzi likhiqiza ukufakwa kuhlu kwamasayithi wezindawo eziphezulu. Futhi, uhlelo lukuvumela ukuthi ulandelele ukuthi iziphi izingcaphuno osuvele unazo ngakho awumoshi isikhathi sakho.
Tags: bdailyizingcaphunoco-izingcaphunococitationsizingcaphuno ze-googleukusesha kwendawoiphephabhuku lokusesha
Ngebhokisi leposi, ngingahle ngenze ibhokisi lokungenayo lingabikho